Wariye lagu dhaawacay magaaladda Muqdisho | Ilwareed Online
Home WARKA DALKA Wariye lagu dhaawacay magaaladda Muqdisho
Wariye lagu dhaawacay magaaladda Muqdisho
Mahad Maxamed Cabdiraxmaan “Mahad Mutawakil” oo ka mid ah wariyaasha u-shaqeeya Radio Shabelle, ayaa maanta ku dhaawacmay Israsaaseyn Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya ku dhexmartay, xaafadda Tarbuunka ee degmadda Hodan ee Magaaladda Muqdisho.
“Israsaaseynta, waxaa ay u dhexeysay ciidamada Guddoomiyaha Maamulka Degmada Hodan Axmed Salaad Ibraahim iyo ciidamo kale. Wariyaha waxaa goobta uu ku wareystay Guddoomiyaha degmadda” sidaasi waxaa sheegay Idaacada uu u-shaqeeyo wariyaha.
Ma jirto wax hadal ah oo kasoo yeeray Maamulka degmadda Hodan iyo Masuuliyiinta kale ee dowladda.
Mahad Mutawakil, ayaa sanadihii dambe si fir-fircoon uga dhex-muuqday warbaahinta gudaha dalka Soomaaliya.
Maalmihii dambe, kala shakiga ciidamadda dowladda ayaa kusoo badanayay magaaladda.
Dowladda Soomaaliya, ayaa wada qorshe cusub , oo ay ku dooneyso in ciidanka Militray-ga dowladda looga saarayo magaaladda Muqdishu, si ciidamadda Police-ka iyo Nabadsugida ay ula wareegaan ammaanka magaaladda Muqdisho.
Previous articleXildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada Nairobi
Next articleGaari walxaha qaraxa lagu soo raray oo lagu qabtay degmada Caabud-waaq